Wararka Maanta: Isniin, Jun 3 , 2013-Ergayga cusub ee Qaramada Midoobay u soo magacowday Soomaaliya oo Muqdisho yimid si uu xilka ula wareego
Wasiirka Warfaafinta ee Dowladda Soomaaliya & Ergayga cusb ee UNSOM
Nicholas Kay oo u dhashay dalka Ingiriiska ayaa waxaa xilka u magacaabay bishii hore xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, Ban Ki-Moon isagoo ka noqon doona madax xafiiska cusub ee Qaramada Midoobay ay ka furanayso Soomaaliya ee UNSOM.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan Muqdisho imaado iyo inaan helo fursad aan ku taageero dowladda Federaalka iyo dadka Soomaaliyeed si dib loogu soo celiyo nabaddii Soomaaliya,” ayuu yiri Nicholas Key markii uu Muqdisho ka soo dagay.
Isagoo sii hadlay ayuu yiri: “Soomaaliya waa dal sharaf weyn iyo taariikh qoto-dheer ku leh caalamka, lehna dhaqan nool iyo qiyam adag. Marnaba ma illaabi doono taas inta aan howshan hayo.”
“Waxaan bogaadinayaa Dr. Mahiga iyo Shaqaalihii UNPOS, kuwaasoo gutay hawshooda, kuna faani kara guulaha ay soo hooyeen. Maanta waxaa billowday waa cusub oo u baryay Qaramada Midoobay iyo UNSOM oo ah hawlgal cusub.”
Mr. Key ayaa sheegay in xafiiska cusub ee Qaramada Midoobay ka furayso Soomaaliya oo dhan uu fursad taariikhi ah u yahay shacabka iyo dowladda Soomaaliya. Waxayna dadka Soomaaliyeed xaq u leeyihiin inay wax weyn fishaan.
“Waxaan ku han-weynahay oo aan rajaynaynaa in sannadka 2016 Somalia laga qabto doorasho ay dadku kusoo doortaan madaxda hoggaamin doonta, caqabayada na horyaallana aad ayay u badan yihiin, laakiin waa inaan shaqo badan qabano si aan uga gudubno dhammaan caqabadaha horteenna yaalla.
Sidoo kale, ergaygu wuxuu sheegay in maalmaha soo socda uu Muqdisho kula kulmi doono madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, uuna la kulmi doono xubnaha kale ee dowladda, madaxda AMISOM iyo IGAD, bulshada rayidka ah iyo saaxiibbada kale ee taageera Soomaaliya.
“Waxaan daneynayaa inaan xiriir adag la sameysto dhammaan dadka ka shaqeynaya maslaxadda dowladda iyo dadka Soomaaliyeed. Marka ugu horreysa, shaqaalaheenna waxay saldhig ka dhigan doonaan magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa, Garoowe iyo Baydhabo, waxaana ka go’an in Soomaalida oo dhan ay la shaqeeyaan,” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Ergeyga ayaa hadalkiisa raaciyay: “Aniga shakhsi ahaan waxaan si aad ah u aamin-sanahay hawlgalkan, waxaana ku hanweynahay hawsha bilaha soo socota aan qaban doono.”
UNSOM waa xafiis cusub oo ah hawlgal siyaasadeed ee Qaramada Midoobay, oo hawshiisa billaabay maanta oo ah 03-Juun-2013. Waxaana xilkiisa ka mid ah inuu taageero dhismaha qaranka iyo nabadeynta, xooggana saaro dowlad-wanaagga, dib-u-habeyn hay’adaha ammaanka, sharciga iyo kala dambeynta, xuquuqda aadanaha, dhex-dhexaadinta siyaasadeed iyo isku-duwidda kaalmada caalamiga.